भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल र श्रीलंकालाई गराए चीनविरुद्ध सचेत ! | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल र श्रीलंकालाई गराए चीनविरुद्ध सचेत !
access_time२०७७ साल श्रावण १६ गते, शुक्रबार ०८:१६ PM chat_bubble_outline Comments folder_open राजनीति
एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मौरीससका प्रधानमन्त्री प्रविन्द जुगनाथसँग भर्चुअल कार्यक्रममार्फत सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको उद्घाटन गरे । भर्चुअल कार्यक्रममार्फत मोदीले छिमेकी देशसँग साझेदारी र सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेपाल र श्रीलंकालाई संकेत गर्दै मोदीले चीनसँग साझेदारी नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, 'विकासको खोजीमा गलत पार्टनर खोज्दा शक्ति संघर्षमा पुगिन्छ । विकासको नाममा गलत देशसँग साझेदारी गिर्दा कयौँ देश समस्यामा परेका छन् । विकासकै कारण औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी शासनको मारमा पर्नुपर्छ । विश्व शक्ति संघर्षमा परेर समस्या पर्नसक्छ ।'
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनको नाम नलिइकन श्रीलंका र नेपालमा चिनियाँ लगानीले समस्या निम्ताउने भन्दै सचेत गराएका छन् । उनले भारतको विकास मानवता केन्द्रित भएको दावी पनि गरेका छन् । उनले भनेका छन्, 'भारत आफ्नो साझेदार देशको सम्मान चाहन्छ । भारतले कुनै राजनीतिक र आर्थिक लाभका लागि मात्रै सम्बन्ध स्थापित गर्दैन ।'
चीनले नेपाल जोड्ने झण्डै ३० करोड डलरको रेल परियोजनाको काम सुरु गर्न थालेसँगै मोदीले कर्जाले समस्या निम्ताउने भन्दै सचेत गराएका आजतकको अनलाइन संस्करणमा उल्लेख छ । भारतले आर्थिक सहायताबाट चीनले देशको रणनीतिक महत्वको क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने आरोप पनि लगाएको छ ।